महिलाको भर्जिनिटी पुन: प्राप्त गर्न सकिन्छ ! – NawalpurTimes.com
महिलाको भर्जिनिटी पुन: प्राप्त गर्न सकिन्छ !
प्रकाशित : २०७७ जेठ १ गते २२:१४
विशेष गरेर महिला अर्थात् केटीको कौमार्य विकसित मानव सभ्यताको मात्र नभई पहिलेदेखि नै मानव यौनिकताको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको पाइन्छ । यसमा कसको नियन्त्रण हुने भन्ने एक किसिमको द्वन्द्व जहिले पनि समाजमा रहेको पाइन्छ । विवाहमा कुमार केटालाई कन्या (केटी) खोज्ने चलन भए पनि विशेष गरेर कुमारी केटीको सन्दर्भमा कौमार्य भङ्ग भए/नभएको कुराले निकै महत्त्व राख्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो स्थितिको कन्या कुमारीलाई अक्षत योनि भन्ने गरिन्छ र अंग्रेजी शब्द भर्जिन (Virgin) यसका लागि प्रयोग गरिन्छ । कुनै व्यक्तिसँग पनि यौनसम्पर्क राख्नु नै कौमार्य भङ्ग हुनु हो । अहिले कस्तो किसिमको यौन क्रियाकलापलाई यौनसम्पर्क मान्ने अनि कस्तोलाई नमान्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । केटी (महिला) का लागि कुमारीत्व र केटा (पुरुष) का लागि कुमारत्व शारीरिक कुरा मात्र होइन, भावनात्मक पनि हो । लिङ्ग प्रवेश नभई यौन उत्तेजक रूपमा यौनाङ्गमा हात, औंलाको भरपुर प्रयोग गरेर यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएको कुरालाई के भन्ने ? जस्ता प्रश्न बाँकी नै रहन्छ । जैविक रूपमा यौनसम्पर्कको अनुभवहीनता नै कौमार्य भङ्ग नहुन अर्थात् कुमार वा कुमारी हुनु हो । धेरैजसो स्थितिमा कौमार्य (Virginity) भङ्ग हुने कुरा किशोरी वा युवतीको वा भनौं महिलाको सन्दर्भमा गरिने गरिन्छ । त्यसैले होला, कुनै विवाहित दुलहीको कौमार्य परीक्षण गर्ने अनेक उपाय गरिएको भेटिए पनि विशेष गरेर महिलाको योनिच्छद दुरुस्त छ वा छैन भन्ने कुरामा भर पर्ने गरेको देखिन्छ ।
यौन सम्पर्कको अनुभवहीनता नै कौमार्य कायम भएको स्थिति हो । यौन सम्पर्कको अनुभव एकपल्ट भएपछि यसलाई अनुभवहीनताको अवस्थामा प्राकृतिक होस् वा कृत्रिम तरिकाले लान वा जान सकिन्न । कतिपय सम्प्रदायमा यौनसम्पर्क राखिए पनि कौमार्य नवीकरण गरिने प्रचलन रहेको सुन्न पाइन्छ, तर अहिले कुरा फरक भएका छन् । तपाईंले एकपटक यौनसम्पर्कको अनुभव लिएपछि कोही पनि पुन: अनुभवहीनताको स्थितिमा पुग्न सक्दैन । बिर्सनुले पनि त्यो स्थितिमा पुगिन्न । त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा तपाईंले कौमार्यतालाई फर्काउन सक्नुहुन्न । सायद तपाईंले योनिच्छदलाई पुन: बनाउने कुरा गर्नुभएको होला । अहिले कतिपय देशमा यसको चलन छ । च्यातिसकिएको भए पनि शल्यक्रिया गरेर पुन: बनाइने (हाइमेनोराफी Hymenorrhaphy (हाइमेनोराफी) गरेको पनि पाइन्छ, जसले योनिच्छदलाई कुमारीत्वको आधार मान्ने कुरालाई थप जटिल र अमान्य बनाइदिएको छ । यो प्राकृतिक रूपमा आफैं पुरानै अवस्थामा फर्कने स्थिति हुँदैन । यसको अर्को पाटो पनि हेरौं, कतिपय महिलाको सन्दर्भमा कैयौं पटक यौनसम्पर्क राखिसकेपछि पनि योनिच्छद नच्यातिएको अवस्थामा भेटिएको छ ।
पहिलेको प्रेम तथा यौनसम्बन्धबारे चर्चा गरिएन भने तपाईं यस अवस्थाबाट गुज्रनुभएको होला भन्ने थाहा पाउन सजिलो छैन । महिला यौनअङ्गको बनावटबारेमा सामान्य जानकारी पुरुषलाई हुने भए पनि कुनै एक व्यक्ति योनिको बनावट वा स्वरूप यस्तै थियो भन्ने त थाहा हुँदैन र यौनसम्पर्क राखेको कुरा थाहा पाउन त झन् गाह्रो कुरा हो । कुमारीत्व योनिच्छद भए/नभएको कुरालाई आधार बनाउन नमिल्ने कुरा त तपाईंले बुझि नै सक्नुभयो । विचार गर्नुपर्ने कुरा के भने घर–परिवार, छर–छिमेक अनि समाजले यस्ता सम्भावित सम्बन्धलाई जहिले पनि नियालिरहेको हुन्छ र गोप्यता वा गोपनियताको कुरा वास्तवमा तुलनात्मक हुन सक्छ । अर्को व्यक्तिसँगको सामीप्यता कसै न कसैले देखेको हुन्छ र यस्ता कुरा सार्वजनिक हुन सक्छ र अन्त्यमा थाहा नपाओस् भन्ने चाहना भएको व्यक्ति जस्तै कि श्रीमान्ले पनि थाहा पाउने सम्भावना हुन सक्छ । तर तपाईंले यो प्रश्न किन सोध्नुभएको हो, सोको जानकारी पाउन पाएको भए तपाईंको जिज्ञासाको सही अर्थमा समाधानको कुरा गर्न सकिन्थ्यो ।